Marika vaovao 2019
Tamin'ny volana martsa 2019, voasoratra tsara ny anarana sy ny lisitry ny anarana dia avy eo izahay dia namatsy usd100,000 mba hampiroboroboana amin'ireo tranokala B2B iraisam-pirenena. Ity dia nanamarika ny fanombohan'ny fitantanana marika. Tamin'ny Jolay 2019 dia nanomboka ny fananganana tranokala manokana izahay, nametraka ny departemanta misahana ny asantsika manokana ary nahazo karama bebe kokoa ...
Fampiratiana amin'ny taona 2018
Izahay dia nandray anjara tamin'ny fampirantiana momba ny taon-dasa amin'ny fonosana sy ny fanaovana pirinty, noraketana ary nandalina ireo fitaovana mandroso & ny teknolojia vaovao. Tena tsara amin'ny fampandrosoana ho antsika izany.
Fihaonana isan-taona amin'ny taona 2018!
Mikasika ny fivoriana fanao isan-taona amin'ny taona 2018 dia nanolotra ny fomba fiasa fiaraha-miasa ny orinasanay. Ny mpiara-miasa iray no lasa mpiara-miasa voalohany amin'ny orinasa ary nomena fizarana sy valisoa. Nandritra ny fivoriana fanao isan-taona 2018 dia nanambara tamin'ny mpiasa rehetra ny orinasa ny làlan'ny fampandrosoana ny compa ...
Ny mpanjifa avy amin'ny fampiratiana dia tonga nitsidika anay
Tamin'ity taona ity, ny mpanjifanay VIP, izay niara-niasa taminay nandritra ny dimy taona mahery, dia tonga nitsidika anay, nanao raharaha nifampiraharaha ary nanao sonia ny fifanarahana isan-taona amin'ny farany. Faly be izahay fa nanana fiandohana tsara toy izany!
Manomboka ny varotra 2017
Nanomboka ny varotra vahiny izahay. Hatramin'ny taona 2017 dia nanomboka ny varotra ivelany isika. Talohan'ity taona ity, ny tsena an-trano ihany no nandrakotra anay, fa mihamaro hatrany ireo mpanjifa vahiny no mitsidika ny orinasanay. Noho izany, miaraka amin'ny fitomboan'ny volan'ny orinasanay, dia nametrapetranay ny departemanta varotra, izay midika p ...
Nahazo baiko lehibe izahay
Tamin'ny taona 2016, nahazo ny filaharan'ny fonosana orinasa lehibe sy tsara indrindra an-trano izahay - Huji Hua. Nifidy anay tamin'ny farany izy ireo, aorian'ny fifidianana fifidianana Ny kompania rehetra nataonay dia faly sy nampientam-po! Ity hetsika ity dia nanamarika fa tsy ny fanatsarana ny tanjaky ny orinasa ihany, fa koa ny imp ...
Nihoatra ny olona zato ny ekipanay
Ny taona 2015 dia taonan'ny horohoron-tany. Nisy fanovana vaovao natao tamin'ny endri-barotra rehetra avy any amin'ny varotra ary ny modely vaovao dia nivoaka. Nanomboka nianatra teknolojia izahay ary nampiofana ny ekipanay. Tamin'ity taona ity, nihoatra ny zato ny eken'ny varotra eto amintsika.
Tsidiho ny fampiratiana mba hahalalana bebe kokoa momba ny tsena
Tamin'ny taona 2014 dia nitodika ny sainay tamin'ny fampirantiana an-trano sy vahiny ary nitsidika ny fonosana tany Guangzhou sy ny fampirantiana tany Dubai. Ary nahazo be dia be izahay.
Ny kalitao vokatra dia ny fiainan'ny orinasa
Hatramin'ny taona 2013, nifantoka bebe kokoa tamin'ny kalitao vokatra izahay ary nandidy baiko vitsivitsy izay tsy nangatahana momba izany. Nandritra ny fivoriana fanao isan-taona dia nanolotra ilay lohahevitra antsoina hoe "Quality isika no fiainana".
Tamin'ny taona 2012, natsangana ny Qingdao Shuying Commercial Trading Co, Ltd, izay nanamarika fa namokatra ny entana rehetra izahay tamin'ny anaran'ny orinasa nanomboka teo ary tsy mpiasa izahay.